China Cryolipolysis ကိုယ်ခန္ဓာသည်အအေးခဲနေသောစက်လေးများကိုလက်ကိုင်ပစ္စည်းလေးခုဖြင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည် KEYLASER
Cryolipolysis body သည်လက်လေးချောင်းဖြင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်အလုပ်လုပ်သောအဆီအေးခဲစက်ကိုပါးလွှာစေသည်
1. ဖန်သားပြင်နှင့်အတူလက်ကိုင်လေး, တစ်ချိန်တည်းမှာအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်
2. ဆီလီကွန်လက်ကိုင်နှစ်မျိုး - ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆီလီကွန်ကို သုံး၍ သုံးစွဲသူများကိုကုသမှုခံယူရာတွင်သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန်ပျော့ပျောင်းသည်
၃၆၀ ဒီဂရီရေခဲသေတ္တာလက်ကိုင်: ၃၆၀ ဒီဂရီအအေးခံ၊
၁.၃၆၀ ဒီဂရီစီးရီး Icer စီးရီးသည်လုံခြုံစိတ်ချရသောနေရာကိုပထမနေရာတွင်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ လုံခြုံစိတ်ချရသောအလိုအလျောက်ရှာဖွေတွေ့ရှိချက် (၆) ခုရှိသည်။
၂။ စက်တွင်ပုံမှန်လည်ပတ်မှုသေချာစေရန်ရေစီး / အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာ ၁၂ ခုတပ်ဆင်ထားသည်။
(၄) ဂျပန်အသံတိတ်စုပ်စက်ဖြင့်ဆူညံသံကို ၃၀% လျှော့ချပြီးအသုံးပြုမှုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
လက်ကိုင်လေးခုအတွက် 1.Four operation the တစ်ချိန်တည်းတွင်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်
2.Vakuum power: 100KPa (max)
4. ကုသမှုအချိန်: 1-60min
Interface ၁၀.၄ လက်မထိတွေ့အရောင်မျက်နှာပြင်
လက်ကိုင်4လက်ကိုင်တစ်ချိန်တည်းမှာအလုပ်လုပ်ကြသည်
ကုသမှု Temp -10 ℃ - +5℃
ကုသချိန် ၁-၆၀ မိနစ်
Volume ကို 47 * 43 * 120cm
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ 220V / 110V
Q1 ။ cryo အဟောင်းနှင့် silicone cryo အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။
Re: ပထမအချက်မှာ silicone cryo သည်အပူကိုပထမဆုံးခံယူပြီးနောက်အအေးခံသည်။ ကုသမှုပိုမိုကောင်းမွန်သည်၊ cryo အဟောင်းသည်သာအအေးခံသည်။ ဒုတိယအချက်မှာ silicone cryo သည်အေးခဲနေသောအမြှေးပါးမရှိဘဲအသုံးပြုနိုင်သည်။ cryo အဟောင်းကိုအသုံးပြုရမည်။ တတိယအနေဖြင့် silicone cryo သည်စုပ်ယူမှုအနက်၊ ကြည်လင်သောအေးခဲမှု၊ အသားအရေကိုပိုမိုကြည်လင်ပြတ်သားစွာမြင်နိုင်သည်။
Q2 ။ စက်ကိုဘယ်လိုလည်ပတ်ရမလဲ၊ ကုသမှုသင်တန်းကဘာလဲ။
Re: ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုသူလက်စွဲ၊ လုပ်ငန်းဗီဒီယိုနှင့်ပရိုတိုကောသည်သင့်အားပေးလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးပြု၍ မပါ’• ၁-၂ လမှ ၁ လအထိကုသမှုခံယူရမည်။
Q3 ။ ဘယ်နှစ်နှစ်အာမခံထားပါသလဲ။
Re: ၂၄ လ (လူသားပျက်စီးမှုမပါ ၀ င်)၊ တစ်သက်တာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်နည်းပညာအထောက်အပံ့။
Q4 ။ တင်ပို့နေစဉ်စက်ပျက်နေရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
Re: အာမခံထားမှုအောက်တွင်တင်ထားသောစက်များ၊ တင်ပို့စဉ်အတွင်းမည်သည့်ပျက်စီးမှုမဆိုကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှသင့်အားအချိန်မီတောင်းဆိုရန်ကူညီလိမ့်မည်။
Q5 ။ စက်ကိုပြုပြင်ရန်လိုအပ်လျှင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့လုပ်ရမည်နည်း။
Re: ပြonlineနာကိုအွန်လိုင်းနှင့်ဗွီဒီယိုဖြေရှင်းရန်သင့်အားကူညီပြီးသော၊ ရောင်းချသော ၀ န်ဆောင်မှုဌာနသည်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကျွမ်းကျင်သည်။ ပြproblemနာကိုအွန်လိုင်း ချ၍ မရပါကသင့်အားပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အပိုပစ္စည်းများပို့မည်။
ရှေ့သို့ ဒေါင်လိုက် diode လေဆာ conbine yag လေဆာ ipl shr elight rf multi functions
နောက်တစ်ခု: Ems ကခန္ဓာကိုယ်တွင်းကြွက်သားသန်မာသောခန္ဓာကိုယ်ပါးလွှာသောစက်ကိုထုလုပ်သည်